CCEsca – Francis Turbo : nahazo ny anjarany avokoa ny tsirairay | NewsMada
Tonga maro ny mpijery ! Liana sy voasariky ny fampisehoana in-droa nisesy notontosain’i Francis Turbo ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny CCEsca Antanimena. Seho nanehoany ankolaka na mivantana ny zava-misy eo amin’ny tontolon’ny finoana.
Tehaka nirefodrefotra naneho fankasitrahana no nasetrin’ny mpijery tonga marobe nanatrika ny seho an-tsehatra « Andriamanitra ô ! Inona ary ity ? » niarahana tamin’i Francis Turbo tao amin’ny CCEsca Antanimena. Fampisehoana nahatsapana fa manana hafatra goavana tiana hampitaina ity andrarezin’ny hatsikana ity. Iray tamin’ireny ny halehiben’ny fahendrena sy fahasoavana azon’ny zanak’olombelona avy amin’Andriamanitra… Saingy, ny olombelona minia mikipy na mandray izany amina endrika hafa mihitsy.
« Raha mbola izaho no izaho, tsy ekeko mihitsy ny fanambadian’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy. Tsy sitrak’Andriamanitra rahateo ny fanaovana izany », hoy izy. Fehezanteny tsikaritra avy hatrany fa nandona ny fo amam-panahin’ny olona ka niteraka tehaka nirefodrefotra ho fankasitrahana izany. Nolaroiny sy noravahany hatsikana hatrany ny hafatra tiany hampitaina hany ka mora tamin’ny mpijery ny nandray izany.
Na tsy niala lavitra ny tantara voarakitry ny Baiboly aza i Francis Turbo, tsikaritra fa notohanany tamin’ny alalan’ny siansa (asa fikarohan’ireo manam-pahaizana, mpikaroka) sy ny fahendrena ary soatoavina malagasy ny hevitra tiany nampitaina. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ny mpino na ny mpitia siansa na ireo mpanandratra ny maha malagasy.